လူမှုရေးကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုနှင့်အတူပြNagနာခုနစ်ခု | Martech Zone
တနင်္လာနေ့, ဧပြီ 3, 2017 ကီဗင်မြောက်
လူမှုကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ကြီးမားသောစကားလုံးတစ်လုံးဖြစ်လာသည်။ သို့တိုင်စျေးဝယ်သူနှင့်ရောင်းသူများစွာတို့သည်သူတို့၏ ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်း ၀ ယ်ခြင်းနှင့်အတူ“ သွားခြင်း” ကိုနှောင့်နှေးနေကြသည်။ ဒါဘာကြောင့်လဲ
တူညီသောအကြောင်းပြချက်များစွာကြောင့် e-commerce သည်အုတ်နှင့်အုတ်နံရံလက်လီအရောင်းဆိုင်များနှင့်အပြင်းအထန်ယှဉ်ပြိုင်ရန်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့သည်။ လူမှုကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးသည်ရင့်ကျက်သောဂေဟစနစ်နှင့်အယူအဆတစ်ခုဖြစ်ပြီးယနေ့တွင် e-commerce ဖြစ်လာသည့်ရေနံစိမ်းအရောင်းအဝယ်ပြုသည့်စကြဝchallengeာကိုစိန်ခေါ်ရန်အချိန်ယူရလိမ့်မည်။
ပြနာများစွာရှိပါသည်၊ ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ရန်အလားအလာသည်ကြီးမားသော်လည်းကြီးမားသောပုံသဏ္levelာန်အရဆိုလျှင်လူမှုရေးကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးသည်ယခုထိကြီးမားသောလမ်းပေါ်တွင်မဖြစ်ပေါ်သေးသောအဓိကအကြောင်းပြချက် (၆) ခုရှိသည်။
လူမှုရေးကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုတာဘာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငြင်းပွားစရာတွေရှိနေတယ်။ ဟုတ်လား Facebook က Marketplace? ဒါမျိုးက apps များလား ကမ်းနားလမ်း နှင့် လွတ်ပါအနေဖြင့်ကျောက်တုံးကိုပစ်လိုက်ပုံရသည် Craigslist? ၎င်းသည်တက်ကြွသောလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများနှင့်စာရင်းသွင်းခြင်းရှိပါသလား အချစ်ရယ်? လူမှုရေးကွန်ရက်များပေါ်တွင်သာကြော်ငြာတင်ခြင်းလား။ အဲဒါကိုမင်းကိုဝေနေလား ကို eBay သင်၏လူမှုမီဒီယာ feeds စာရင်းများ? လူမှုကူးသန်းရောင်း ၀ ယ်မှုမစတင်မှီမြေထုဆွဲအားစင်တာတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သည်။ အမေဇုံနှင့် eBay တို့သည်အီလက်ထရွန်နစ်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှု၏ဗဟိုချက်ဖြစ်သည်။ လူမှုရေးကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးတွင်အလားတူအရာမရှိသေးပါ။
စျေးဝယ်သူများသည်သေချာပေါက်၎င်းကိုမရှာကြပါ e-commerce စျေးဝယ်သူများ၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်သည်အွန်လိုင်းတွင်စျေးဝယ်သောအခါ Amazon သို့ကျော်ကြားသည်။ သင်အလောင်းအစားနိုင်သည် eBay သည်ထိုအာရုံကိုနောက်ထပ်ကြီးမားသောအပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုယူသည်။ လူမှုကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးတွင်မျက်လုံးမည်မျှရှိသနည်း။ သင်အလောင်းအစားလုပ်နိုင်သည်မှာ eBay နှင့် Amazon တို့ကတက်ကြွသောစျေးဝယ်သူများ၏သုံးစွဲသူများ၏အခြေခံများအဖြစ် eBay နှင့် Amazon တို့အတူတကွသတင်းပို့သောဘီလီယံဝက်နီးပါးမျှမဟုတ်ပါ။
စျေးဝယ်ခြင်းအတွေ့အကြုံနှင့်ရွေးချယ်ခြင်းသည် ပို၍ ဆိုးသည်။ စျေးဝယ်သူတစ်ယောက်အနေဖြင့်၊ သင်၌ eBay နှင့် Amazon.com အကောင့်များရှိပါကကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုရောင်းချရန်အတွက်သင်ဝယ်ယူနိုင်သည်။ လူမှုရေးကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးတွင်ထုတ်ကုန်နှင့်ရောင်းချသူများရွေးချယ်ခြင်းသည်အကန့်အသတ်ရှိသေးသည်။ သင်သည်များစွာသောဆိုဒ်များနှင့်ဂုဏ်သတ္တိများကိုဖြတ်ကျော်ပြီး၎င်းတို့ကိုရှာဖွေရန်သင့်လမ်းမှထွက်ရန်လိုသည်။ ၎င်းသည်ကြက်ဥနှင့်ဥပြproblemနာဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများနည်းလေလေရောင်းဝယ်မှုနည်းလေလေဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာပြproblemနာကိုဖြေရှင်းပေးသောရောင်းသူနည်းလေလေဖြစ်သည်။ အခုအချိန်မှာရောင်းသူအများစုဟာအမှန်တကယ်စျေး ၀ ယ်သူတွေအများဆုံးရှိတဲ့နေရာမှာရောင်းဖို့ရွေးချယ်နေကြတာပါ။ ဆိုလိုတာကတော့အမှန်တကယ်ထုတ်ကုန်အများစုရှိသည့်နေရာဖြစ်သည်။
စျေးဝယ်သူများသည်လူမှုရေးကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကိုစဉ်းစားစရာမလိုဘဲရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ E-commerce သည်အရောင်းအ ၀ ယ်နှင့်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုသိပ္ပံပညာတစ်ခုသို့ပြောင်းလဲစေသည်။ Amazon Prime သည်ဤတွင်အကောင်းဆုံးဥပမာဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။ သို့သော် eBay သည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းအတော်လေးအောင်မြင်ခဲ့သည်။ စျေးဝယ်သူများသည်အဓိကစျေးကွက်ဝယ်ယူမှုကိုစိတ် ၀ င်စားမှုဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ပွတ်တိုက်မှုမရှိသလောက်ဖြစ်သော်လည်းကုန်ပစ္စည်းကိုရှာဖွေရန်၊ ငွေပေးငွေယူလုပ်ငန်းစဉ်ကိုနားလည်ရန်နှင့်လူမှုရေးကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုပြီးစီးရန်တောင်သည် ပို၍ မတ်စောက်ပြီးကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်မှုနည်းသည်။ ဆိုလိုသည်မှာရောင်းသူများထံမှပိုမိုသေးငယ်သည့်စျေးဝယ်သူများအနေဖြင့်ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းနိမ့်သည်
ငွေသွင်းငွေထုတ်ပြproblemsနာများပိုမိုလွယ်ကူစွာ snowball ။ eBay သို့မဟုတ် Amazon တွင်အရောင်းအဝယ်၏နောက်ဆုံးအသေးစိတ်အချက်အလက်များ - စျေးဝယ်သူများ၏ရောင်းချသူကိုအကဲဖြတ်ခြင်း၊ အမိန့်အတည်ပြုခြင်း၊ ပြည့်စုံမှုခြေရာခံခြင်း၊ ပြန်လည်ရောက်ရှိခြင်းနှင့်ဖလှယ်ခြင်းများ၊ အငြင်းပွားမှုများနှင့်အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းခြင်း - ကိုချောချောမွေ့မွေ့နှင့်ဗဟိုတစ်ခုတည်းမှအနည်းငယ်သာကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ နှိပ်လိုက်ရင်။ လွတ်လပ်သော ၀ က်ဘ်ဆိုက်ပိုင်ရှင်များစွာသည်အလားတူချောဆီနှင့်ဒေါ်လာများကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ကြပြီး၊ ဤအဆင့်အရောင်နှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ လူမှုရေးကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးတွင် ၁၉၉၉ ခုနှစ် eBay တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်အတိုင်းတောရိုင်းအနောက်ပိုင်းစည်းမျဉ်းများသည်ဆက်လက်ကျင့်သုံးဆဲဖြစ်သည်။ စျေးဝယ်သူများနှင့်ရောင်းသူများစွာအတွက်၎င်းသည်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသည့်အလားအလာမဟုတ်ပါ။
privacy ကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုများကျော်လွှားရန်ခဲယဉ်းသည်။ စျေး ၀ ယ်သူအများစုအတွက်သီးသန့်တည်ရှိမှုကိုမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းတိုးများလာသည် လူမှုရေး မကြာခဏအတိုကောက်ဖြစ်ပါတယ် ငါ၏အဒေတာစုဆောင်းနှင့်အမြတ်အစွန်းအတွက်အသုံးပြုသည်။ စျေးဝယ်သူများစွာအတွက် လူမှုရေး commerce ကို အသံနဲ့တူတယ် လျော့နည်း privacy ကိုပိုမိုအန္တရာယ်။ ဒီစိုးရိမ်ပူပန်မှုများအားလျော့ပါးရန်အချိန်၊ အခြေခံအဆောက်အ ဦ များ၊ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့်လူသိရှင်ကြားထုတ်ယူရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ဤအချိန်အတောအတွင်း၎င်းတို့သည်ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းကိုအကျိုးသက်ရောက်မည်ဟုထင်မြင်သောရောင်းသူများသည်မှန်ကန်ကောင်းမှန်လိမ့်မည်။
စျေးဝယ်သည်ကွဲပြားသောလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပြောရန်ထင်ရှားသည့်အရာဖြစ်ပုံရသော်လည်းလူမှုမီဒီယာသုံးစွဲသူများသည်လူမှုရေးနှင့်စျေးဝယ်ခြင်းကိုရောနှောရန်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါ။ သူတို့အရင်ကတစ်ခါမှမလုပ်ဖူးဘူး။ လူမှုရေးမီဒီယာသုံးစွဲသူများကိုစျေးဝယ်ခြင်းကိုသူတို့လူမှုဆက်ဆံရေးအဖြစ်စဉ်းစားရန်တွန်းအားပေးရန်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများမရှိ။ စားသုံးသူများမှာမရှိသေးပါ လူမှုရေး စျေးဝယ်တဲ့အခါဒါမှမဟုတ်အတွေးအခေါ် စျေးဝယ် လူမှုရေးတဲ့အခါမှာအတွေးအခေါ်။ ဒီအသင်းကိုသူတို့မဖွဲ့စည်းခင်နှစ်အနည်းငယ်လောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
သင်ရောင်းသည်လား၊ သင့် be လူမှုရေးကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး၌တည်၏မကြောက်ကြနှင့်။ ဒီအကြောင်းပြချက်တွေကြောင့်သင်ဟာအများကြီးမပျောက်နိုင်သေးဘူး။ သို့မဟုတ်အခြားနည်းတစ်နည်းပြောရလျှင်စျေးဝယ်သူအများစုရှိသည့်စျေးကွက်များနှင့်စျေးဝယ်သူများနှင့်ရောင်းချသူများအတွက်လုံခြုံစိတ်ချရမှုနှင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်မှုတို့သည်ပိုမိုမြင့်မားသည့်အဓိကစျေးကွက်များ၌သင်၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုနှစ်ဆတိုးခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းဖြင့်အနည်းဆုံးများများရနိုင်သည်။
ဒါကြောင့်ရောင်းသူအများစုအတွက်အကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်ကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖောက်သည်တွေကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲစေတဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးတာ၊ မဟာဗျူဟာကျကျစီးပွားရေးတိုးတက်အောင်လုပ်ခြင်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအသစ်တွေချမှတ်ခြင်း (သို့) အဲဒီမူဘောင်အတွင်းမှာစျေးကွက်အသစ်တွေကိုပစ်မှတ်ထားတာစတာတွေကိုလုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ ကြွင်းသောအရာကိုယ်တိုင်ကဂရုစိုက်ပါလိမ့်မယ်။
Tags: AmazonCraigslistချစ်သူeBayဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စျေးကွက်လွတ်ပါမင်းသမီးလူမှုရေး commerce ကိုလူမှုရေးကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးပြproblemsနာများ
Kevin North သည်သမ္မတနှင့်စီအီးအိုဖြစ်သည် ထေရဝါဒသူသည်ကုမ္ပဏီ၏အမြင်၊ နည်းဗျူဟာ၊ ၀ င်ငွေတိုးပွားမှုနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်တာဝန်ရှိသည်။